Fanatanjahantena malagasy - Moraingy, Kolontsaina malagasy,
ⓘ Fanatanjahantena malagasy - Moraingy, Kolontsaina malagasy, Poopy, D. B. Cooper, Rakotozafy Rosa, Rakotonirina Parfait, Randriamihaja Joseph-Berlioz ..
Ny moraingy na morengy dia karazana haiady nentim-paharazana malagasy ampiasana ny hondry sy ny tongotra, tsy ampiasana fitaovam-piadiana hafa. Tamin ny nanjakan ny taranaka maroseragna tao amin ny Sakalava any amin ny morontsiraka andrefan i Madagasikara no nipoirany. Hatramin izay dia lasa haiady fanao eran i Madagasikara ny moraingy, indrindra any amin ny faritra amorontsiraka, sady koa niely nankany amin ireo nosy hafa aty amin ny Ranomasimbe Indiana toa an i La Réunion sy i Maiôty sy i Kômôro sy i Seisely ary i Maorisy. Eto Madagasikara dia any amin ny faritra avaratra sy atsinanana n ...
Ramahavalisoa José Helihanta fantatra aminny solonanarana hoe Poopy dia Mpanakanto Malagasy. Nianatra teny aminny Lycée Andohalo Izy ary ny anarana hoe Poopy dia solonanarani Giana, izay zanaky ny nenintoany, ka rehefa mitaiza ani Giana izy dia i Giana antsoinankizy hoe "Poopy Kely" ary Izy antsoinizy rehetra hoe "Poopy Be", teo no naharaikitra ny anarani Poopy. Teraka taminny 13 Septambra 1966. Manambady, ary manan-janaka mianadahy izy. Teraka ary lehibe tao anatinny zava-kanto i Poopy. Miangaly mozika koa mantsy ny rainy ary nitendry Clavier tao taminny tarika Henri Ratsimbazafy nandritr ...
D. B. Cooper dia ny haino aman-jery epithet malaza ampiasaina mba hilazana ny tsy fantatra lehilahy keriny ny Boeing 727 fiaramanidina ao aminny airspace eo Portland, Oregon, sy Seattle, Washington, taminny Novambra 24, 1971, extorted $ 200.000 ao aminny vidim-panavotana, ary parachuted ho hafahafa anjara. Na dia teo aza ny lehibe sy foana fihazana olombelona aminizany FBI fanadihadiana, ny niharamboina tsy mbola hita na fantatra tsara. Ny raharaha mitoetra irery no voavaha rivotra piraty Amerikanina fiaramanidina tantara. Ny ahiana ny airline nividy tapakila mampiasa ny antsoina Dan Coope ...
Rakotozafy Lalanirina Rosa dia mpanao fanatanjahantena izay malagasy, misongadina aminny taranja 100 metatra misy fefy.
Rakotonirina Parfait dia mpanao fanatanjahatena malagasy, miangaly ny haiady boxe française savate. Voahosotra ho tompondaka eran-tany taminio taranja io ho anny sokajy 57 kg izy taminny taona 1997 sy 1999.
Voalohany taminny tompondakani Afrika taona 2000 tany Alger, faharoa taminio fifaninanana io taminny taona 2006 sy 2010. Voalohany taminny Lalao afrikana taona 2003 tao Abuja, ary faharoa taminio fifaninanana io ihany taminny taona 1999 sy 2007. Efa in-telo nandray anjara taminny Lalao Olimpika: 2000, 2004, ary 2008.
Rababany Michel Christophe dia mpiangaly Kick Boxing malagasy. Nahazo tompondaka lefitra eran-tany taminio taranja io izy taminny sokajy 63kg taminny taona 2005. Taminny 03 Martsa 2015 dia niharanny lozam-pifamoivoizana Rababany. Voadonanny fiarabe teny aminny by-pass izy raha nitaingina moto scooter ka tsy maintsy nodidiana ny taolan-damosiny. Vokatrizany dia mety tsy ho afaka hiakatra ring intsony Rababany.